ပြင်သစ်ဘာသာ လေ့လာစရာ – အပုိုင်း (၁၉) | MoeMaKa Burmese News & Media
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month December 2018 (68) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ပါရီမောင်။ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၄
Leçon 19 (Lesson 19 )
PASSE RECENT( ပြီးခါစ အတိတ်ကာလ )
သင်ခန်းစာ 18 မှာ Futur Proche ပေးထားခဲ့တော့သူနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ Passé Récent ကို ဒီတပါတ်မှာ ပေးသွားချင်ပါတယ်။
( ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်မှာ သင်ခန်းစာ ခေါင်းစဉ်တပ် မှားသွားတာကိုလဲ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ Leçon 17 အစား Leçon 18 လို့ပြင်ပေးပါ ။ သင်ခန်းစာအသစ်ခေါင်းစဉ်အတွက် ကျနော် copy, paste လုပ်တာမှာမပြင်မိတာပါ )
Passé Récent ကတော့ ဗမာလိုပြောရရင်တော့ ” အခုပဲလုပ်ပြီးခဲ့တယ် ” လို့ပြောရမှာပါ။ Futur Proche ကိုတော့ ” ခနနေရင်၊မကြာခင်လုပ်တော့မလို့ ” ပေါ့ လေ။
ကျနော် အခုပဲ အလုပ်ပြီးခဲ့တယ်။ ကျမ အခုပဲ ညနေစာစားခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော်တို့ အခုလေးတင်ပဲ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ အစရှိသည်ဖြင့် Passé Récent ကို သုံးပြီးပြောကြ၊ ရေးကြရပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ ပုံစံအနေနဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ …….
Sujet + Verbe VENIR + de + Verbe Infinitif
ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကြိယာကို Verbe Infinitif နေရာမှာConjugaison မလုပ်ပဲ ထည့်သွင်းသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက အသုံးပုံစံ ဖြစ်တဲ့ ဖေါ်မြူလာ Verbe VENIR + de မှာတော့ VENIR ကို သက်ဆိုင်ရာအလိုက် Conjugaison လုပ်ပေး ရပါမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ deကို ထည့်ဖို့ကိုလဲ မမေ့ပါနှင့်။ ဥပမာ စာကြောင်းတွေ ရေးကြည့်ရအောင်။
Je viens de manger. ရဗျန်းဒ မော်န့်ဂျေး ၊ ကျနော်၊ကျမ အခုပဲ စားခဲ့ပါတယ်။
Je viens de finir mon dîner. ရဗျန်းဒ ဖီးနီးခ် မွန် ဒီးနေ ။ ကျနော်၊ကျမ အခုပဲ ကျနော့် ညစာ ပြီးခဲ့ပါတယ် ။ ( ၂ မျိုးသုံးနိုင်တာကို ပြောချင်တာပါ)
Nous venons de parler ce sujet. နူ ဗနွန် ဒ ပါ့ခ်လေ စ ဆူဂျေ။ ကျနော်တို့ အခုပဲ ဒီအကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။
Elle vient de se maquiller. အယ်လ် ဗျန့်ဒ စ မာ့ကီးရေး ။သူမ အခုပဲ အလှပြင်လို့ပြီးတယ်။
Elle vient de partir. ( Elle est partie il ya5 minutes )
Le spectacle vient de commencer. ( လူ၊သက်ရှိတွေတင်မဟုတ်ပဲသက်မဲ့တွေလဲသုံးနိုင်တာကိုသတိပြုပါ )
L’avion vient d’atterrir.လာဗီယွန်ဗျန့်ဒါတေရီး။လေယာဉ်အခုပဲဆိုက်သွားခဲ့ပါပြီ။
ပြင်သစ် အသံထွက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မရေးချင်ပါဘူး။ လေ့လာသူတွေ အမှန်အတိုင်း အသံမထွက်နိုင်မှာကို စိုးလို့ပါ။ ရှင်းလင်းချက်တွေ ပေးတဲ့ အခါတွေမှာ မလွှဲသာပဲထည့်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေးထားတဲ့ လင့်တွေ ကိုကြည့်ပြီး အသံမှန်ကို ယူစေချင်ပါတယ်။ Youtube မှာ တင်ပေးထားတဲ့လင့်တွေကတဆင့်ဆက်စပ်ပြီးတွေ့လာတဲ့လင့်တွေထဲကကိုယ်နဲ့အသုံးတည့်မဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ အသံတွေကိုပဲ ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ မူရင်း မိခင်နိုင်ငံသားအသံ ကိုနားထောင်လေ့ကျင့်ရတာ အကောင်းဆုံးပါ ။
အောက်ပါလင့်နဲ့ တွဲဖက်ပြီးလေ့လာပါ။ အဓိပါယ်ကိုရေးပေးထားပါတယ်။
Je viens de partir. ကျနော် အခုပဲ ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။
Tu viens de rentrer. မင်း၊ ခင်ဗျား အခုပဲ ဝင်လာခဲ့တယ်။
Il vient de prendre. သူ အခုပဲ ယူသွားပြီ။
Elle vient de parler. သူမ အခုပဲ ပြောခဲ့တယ်။
Nous venons d’arriver. ကျနော်တို့ အခုပဲရောက်တယ်။
Vous venez de travailler.ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
Ils viennent de manger. သူတို့ အခုပဲ စားခဲ့ကြတယ်။
Elles viennent de dormir. သူမတို့ အခုပဲ အိပ်သွားကြပြီ။
တလက်စတည်း အထက်က လင့်မှာ ပေးထားတဲ့ Passé Composé ထဲက စာကြောင်းတွေကိုလဲ ပေးသွားချင်ပါတယ်။
Passé Composé ကို အကူကြိယာ၂ခုဖြစ်တဲ့ Avoir နဲ့ Etre တို့ကိုသုံးပြီး ယခင်သင်ခန်းစာ တွေမှာ ပြောခဲ့သလို သုံးရပါမယ်။
အဓိက ကြိယာရဲ့ Participe Passé ဆိုတဲ့ Past Form ပုံစံကိုတော့ မဖြစ်မနေ သိထားရပါမယ်။
နောက်တခါ Etre နဲ့ တွဲရမဲ့ ကြိယာများကို သိထားပြီးရင်တော့ ကျန်ကြိယာများကိုတော့Avoir နဲ့တွဲရမယ် ဆိုတာသိကြမှာပါ။( သက်ဆိုင်ရာကြိယာတို့ရဲ့ Participe Passé ကိုလဲ တလက်စတည်း ပေးလိုက်ပါတယ်။) အမနာမ်တွေအတွက် ချိန်ညှိပေးရမှာကိုလဲမမေ့ပါနှင့်ဦး။
ဒီတော့Etreနဲ့တွဲရမဲ့ ကြိယာတွေကတော့ …..
Aller , ( allé ) သွားသည်
Venir , ( venu ) လာသည်
Entrer , ( entré ) ဝင်သည်
Sortir , ( sorti ) ထွက်သည်
Arriver , ( arrivé ) ရောက်သည်
Partir , ( parti ) ထွက်ခွါသည်
Monter , ( monté ) တက်သည်
Passer , ( passé ) ဖြတ်သွားသည်၊ ကျော်ဖြတ်သည်
Descendre , ( descendu ) ဆင်းသည်
Rester , ( resté ) နေခဲ့သည် ၊ ကျန်ရစ်သည်
Tomber , ( tombé ) လိမ့်ကျသည်၊ လဲ ကျသည်
Devenir , (devenu ) ဖြစ်လာသည်
Naître , ( né ) မွေးသည်
mourir , ( mort ) သေသည်
ကြိုတင်နားထောင်ထားဖို့ အသံဖိုင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ( နားထောင်ပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့
Passé Récent အသုံးအနှုံး တခုကို ရှာကြည့်ပါ )
A la boucherie ( အသားဆိုင်မှာ )
နောက်တပါတ်ပြန်ဆုံပါမယ် A bientôt
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Paris Maung, ပါရီမောင်